VaPence naAmai Harris Voita Gakava paMberi peSarudzo dzemuAmerica
Amai Kamala Harris naVaMike Pence
Vatevedzeri vevari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica nhasi vaita gakava kana kuti Vice Presidential debate range rakatarisirwa zvikuru pasi rose.
Vange vachikakavadzana ndiAmai Kamala Harris vebato remaDemocrats vanova Senator vekuCalifornia uye mutevedzeri wemutungamiri wenyika VaMike Pence vebato riri kutonga remaRepublicans.
Gakava iri raitirwa paKingsbury Hall , University of Utah kuSalt Lake City. VaPence naAmai Harris havana kutora nguva vasati vatanga kutatsurana nenyaya dzakawanda kusanganisira iri kunetsa muAmerica nepasi rose yechirwere charura cheCovid-19.
Amai Harris vanova mudzimai mutema wekutanga kuita gakava vachikwikwidza musarudzo semutevedzeri wemutungamiri wenyika vati mutungamiri wenyika VaDonald Trump naVaPence vatadza kutungamira mukurwisa chirwere cheCovid-19.
Amai Harris vati, “Vanhu vemuAmerica havasati vamboona kutadza kutungamira kwakadai panyaya yekurwisa chirwere zvapa kuti vanhu vakawanda varasikirwe nehupenyu nemabasa.”
Vachipindura VaPence vati, “VaTrump kubva zvavanzwa kuti chirwere ichi chave kupararira vakabva vamisa vanhu vemuChina kupinda muAmerica. Izvi zvakatipa nguva yekugadzirira kunyangwe VaBiden vakapikisa danho iri vachiti raive rerusarura.
America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere cheCovid-19. Vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana mashanu kana kuti 7,5 million. Vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana maviri negumi nerimwe, kana kuti 211 000.
Panyaya yezvehupfumi, Amai Harris vati, "Zviri pachena kuti pane musiyano pakati paVaBiden naVaTrump, VaBiden vanotarisa vashandi asi VaTrump vanotarisa vakapfuma chete." Vaenderera mberi vachiti, "Ndokusaka VaTrump vachiti vakapfuma vabhadhare mari shoma yemitero."
Asi VaPence vatiwo, “Patakapinda muhofisi, ini naVaTrump takashanda kugadzirisa hupfumi uye mhuri dzakawanda dzave kutambira mari iri nani. VaBiden vakasarudzwa vachawedzera mitero inobhadharwa nevanhu.”
Dzimwe nyaya dzakurukurwa dzine chekuita nekuchengetedzwa kwemukati menyika uye dzerusarura ganda runonzi nemaDemocrats rinofanira kugadziriswa sezvo vatema vamwe vari kuurayiwa nemapurisa vasina mhaka.
Asi maRepublicans anoti pane zvimwe zvikwata zvakaita seAntifa zvavavanoti zviri kukonzera kusagadzikana nekuita mhirizhonga uye kuvhiringidza mapurisa. Pazeyiwa nyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika zvikuru kupindira kunonzi kwakaitwa neRussia musarudzo dzemuAmerica muna 2016 uye ikozvino. Asi maRepublicans anoti hapana humbowo hwakakwana kuti izvi zvakaitika.
Imwe nyaya yanetsawo inyaya yekusarudzwa kwevatongi vedare repamusoro soro reSupreme Court.
VaTrump vakasarudza Amai Amy Coney Barret kuti vatore chinzvimbo chakasiiwa namuchakabvu Ruth Bader Ginsburg izvo zvisina kufadza vemaDemocrats vaida kuti mutongi asarudzwe panopera sarudzo sezvo maRepublicans akamboramba kuti vaive mutungamiri wenyika VaBarack Obama vadome mutongi mutsva nyika yatarisana nesarudzo.
Vachipawo pfungwa dzavo panyaya yegakava iri, vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika VaTakawira Kapikinyu vekuMaryland muno muAmerica vati gakava iri ranakidza kudarika rakatanga kuitwa naVaTrump naVaBiden.
Vanotungamira bato reDemocratic Party, Doctor Wurayayi Zembe vanoti magakava anoitwa muAmerica akakosha zvikuru nekuti vanhu vanovhota vaine ruzivo nezvakamirira vatungamiri vavo.
Magakava aya anorongwa nekomisheni yakazvimirira inonzi Commission on Presidential Debates uye ange achikokera mutori wenhau webepanhau reUSA Today, Susan Page.
VaTrump naVaBiden vakaita gakava ravo rekutanga musi wa 29 Gunyana. Vari kutarisirwa kuita rechipiri kuMiami musi weChina svondo rinouya ndokunge VaTrump avo vakabatwawo neCovid-19 vave kunzwa zvakanaka.
Gakava rekupedzisira riri kutarisirwa kuitwa musi wa22 mwedzi uno zvekare paBelmont University kuNashville. Sarudzo dzichaitwa musi wa 3 Mbudzi kunyangwe vamwe vanhu mumatunhu makumi mana nemana vatotanga kuvhota.